Apple inotangisa webhusaiti nyowani yeAugmented Reality pane iOS | IPhone nhau
Augmented Reality yakauya kune Apple nharembozha chikuva ine vhezheni 11 yeIOS. Kubva kuvambwa kwayo, zvimwe zvinoshandiswa zvinoshandisa tekinoroji iyi. Zvisinei, Apple iri kushanda nesimba kuti iwedzere Augmented Reality uye yayo ARKit chikuva kuti ivepo muhupenyu hwevashandisi vayo. Nekudaro, inovhura webhusaiti nyowani umo iyo inoda kutsanangura zvirinani kuti iyi tekinoroji nyowani yeramangwana ine chii uye zvakare inopa kunyorera kune yega yega zvikamu zvainodoma.
ARKit yeIOS inogona kushanda pane chero iPhone kana iPad ine iOS 11 kana yakazoiswa. Zvirokwazvo iwe uchayeuka iyo IKEA kunyorera umo zvaive zvichikwanisika kuziva kuti iyo fanicha yaizotaridzika sei - nemazita achiwedzera kuoma kududza - mumba mako usati wazvitenga. Asi aya aingova mavambo chete. Y Apple inokuratidza izvi pawebhusaiti yayo nyowani inonzi "Augmented Reality yeIOS". La webhu nyowani Iyo yakavakirwa pamatavi matatu kana mbiru: Kugadzira, zororo uye dzidzo.
Mukutanga kwezvikamu, «Kugadzira», Apple inoda Kuwedzera Kwechokwadi kugadzirisa matambudziko ezuva nezuva. Muchikamu chino anokurudzira vane mukurumbira App kubva IKEA; iyo App kubva kuAmerican Airlines izvo zvinokutendera iwe kuti uzive kuti kune yako boarding gedhi iripi; kana iye anopa muenzaniso wevashandi veGE vaanotendera kuti vazive kuisa michina mitsva.
Muchikamu chechipiri chezvikamu, «Leisure», Apple inotaura kuti nharaunda yedu inogona kuve nyika yemitambo. Uye ndeyekuti iyo mitambo inobhadharisa mhindu yakawanda neARKit. Mupfungwa iyi, inosimudzira Yangu Yakanyanya Nzara Caterpillar, Monster Park, uyezve, Pokémon GO.
Chekupedzisira, isu tichawana iyo "Dzidzo" chikamu. Kuwedzera Kwechokwadi pInogona kuve nzira yakanaka kune vadiki kuti vadzidze pfungwa nyowani nenzira inonakidza uye inonakidza. Mune ino kesi, zvinotevera zvitatu zvinoshandiswa zvinokurudzirwa: "Yakazara Anatomy", "JigSpace" uye "SkyGuide".
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » Apple inotangisa webhusaiti nyowani yeAugmented Reality pane iOS
Podcast 9x21: HomePod hongu, HomePod kwete